Softwares & Applications – ICT.com.mm
Nitendo Splatoon 2K112,000
Nitendo Mario Kart 8 DeluxeK112,000
Nitendo The Legend Of Zelda: Breath Of the WildK112,000
Adobe Creative Cloud for Enterprise (1 Year /1 User) Education - Renew Single AppK878,363
Adobe Creative Cloud for teams (1 Year /1 User) Education - Renew Single AppK1,132,970
Nitendo Splatoon 2
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Item Code: 70660570 Part Number: NTD-HAC-P-AAB6B-MSE Release date: July 21, 2017 Players: up to 8 players Genre: Action, Multiplayer Game file size: 6.1 GB Supported Languages: Spanish,...
Nitendo Mario Kart 8 Deluxe
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Item Code: 70660330 Part Number: NTD-HAC-P-AABPA-MSE Release date: April 28, 2017 Players: up to 12 players Genre: Racing, Multiplayer, Other Developer: Nintendo Game file size: 6.9 GB...
Nitendo The Legend Of Zelda: Breath Of the Wild
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Item Code: 70660220 Part Number: NTD-HAC-P-AAAAA-MSE Release date: March 03, 2017 Developer: Nintendo Players: 1 player Game file size: 14.4 GB Genre: Adventure, Action, Role-Playing, Other Supported...
Adobe Creative Cloud for Enterprise (1 Year /1 User) Education - Renew Single App
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Part Number: 65297200BB01A12 Creative Cloud for enterprise All Apps ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Enterprise Licensing Subscription Renewal Monthly HED Shared Device Education License Lab and...
Adobe Creative Cloud for teams (1 Year /1 User) Education - Renew Single App
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Part Number: 65272481BB01A12 Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly Education Named license Named Create brand experiences that...
Adobe Creative Cloud for Enterprise (1 Year /1 User) Education - New Single App
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Part Number: 65297207BB01A12 Creative Cloud for enterprise All Apps ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Enterprise Licensing Subscription New Monthly HED Shared Device Education License Lab and Classroom...
Adobe Creative Cloud for teams (1 Year /1 User) Education - New Single App
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Part Number: 65272452BB01A12 Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription New Monthly Education Named license Named Create brand experiences...
Adobe Sign for Enterprise (Transaction / 1 Year) Commercial - Single App
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Part Number: 65305558BAT1A12 Adobe Sign for enterprise ALL Other Multi Asian Languages Enterprise Transaction New No Proration Per Transaction Create brand experiences that drive business success. Activation...
Adobe Sign for Business (Transaction / 1 Year) Commercial - Single App
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Part Number: 65305633BAT1A12 Adobe Sign for business ALL Other Multi Asian Languages Enterprise Transaction New No Proration Per Transaction Create brand experiences that drive business success. Activation...
Adobe Sign for Enterprise (150 Transaction / 1 Year) Commercial - Single App
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Part Number: 65305575BA01A12 Adobe Sign for enterprise ALL Other Multi Asian Languages Enterprise Hosted Subscription New Monthly 1 User Create brand experiences that drive business success. Activation...
Adobe Sign for Business (150 Transaction / 1 Year) Commercial - Single App
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Part Number: 65305612BA01A12 Adobe Sign for business ALL Other Multi Asian Languages Enterprise Hosted Subscription New Monthly 1 User Create brand experiences that drive business success. Activation လုပ်ရန်...
Adobe Creative Cloud for teams (1 Year / 1 User) Commercial - Renew Single App
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Part Number: 65297756BA01A12 Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly 1 User Get 20+ creative apps including...
Adobe Photoshop for teams (1 Year / 1 User) Education - Renew Single App
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Part Number: 65272490BB01A12 Photoshop for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly Education Named License Named Edit, composite, and create beautiful images,...
Adobe Lightroom Classic for teams (1 Year / 1 User) Education - Renew Single App
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Part Number: 65296101BB01A12 Lightroom Classic for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly Education Named license Named Edit, organize, store, and share...
Adobe InDesign for teams (1 Year / 1 User) Education - Renew Single App
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Part Number: 65272348BB01A12 InDesign for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly Education Named License Named Design and publish elegant layouts for...
Adobe Illustrator for teams (1 Year / 1 User) Education - Renew Single App
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Part Number: 65272366BB01A12 Illustrator for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly Education Named License Named Create beautiful vector art and illustrations...
Adobe Dreamweaver for teams (1 Year / 1 User) Education - Renew Single App
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Part Number: 65272432BB01A12 Dreamweaver for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly Education Named License Named Design and develop modern, responsive web...
Adobe Captivate for teams (1 Year / 1 User) Education - Renew Single App
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Part Number: 65297396BB01A12 Captivate for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly Education Named license Named Fast forward eLearning – Ease for...
Adobe Animate / Flash Professional for teams (1 Year / 1 User) Education - Renew Single App
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Part Number: 65272423BB01A12 Animate / Flash Professional for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly Education Named License Named A new age...
Adobe After Effect for teams (1 Year / 1 User) Education - Renew Single App
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Part Number: 65272504BB01A12 After Effects for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly Education Named License Named Cinematic visual effects and motion...
Adobe Premiere Pro for teams (1 Year / 1 User) Education - Renew Single App
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Part Number: 65272395BB01A12 Adobe Premiere Pro for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly Education Named License Named Industry-standard pro video and...
Adobe Audition for teams (1 Year / 1 User) Education - Renew Single App
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Part Number: 65297995BB01A12 Adobe Audition for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly Education Named License Named Bring stories to life with audio....
Adobe Acrobat Pro DC for teams (1 Year / 1 User) Education - New Single App
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Part Number: 65297995BB01A12 Acrobat Pro DC for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly Education Named license Named The complete PDF solution for...
Adobe Photoshop for teams (1 Year / 1 User) Education - New Single App
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Part Number: 65272497BB01A12 Photoshop for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription New Monthly Education Named License Named Edit, organize, store, and share photos...